अनिश न्यौपाने “मनको आँखा” का जोर गजल | पल्लव साहित्यिक ई-पत्रिका अनिश न्यौपाने “मनको आँखा” का जोर गजल – पल्लव साहित्यिक ई-पत्रिका
मलाई केही गर्न हौसला दिने तिमी
आज आफै केही नगर्ने, बिचारमा छौ
अनिशले सोच्न समय दिएकै छ त !
फेरि किन यति धेरै, हतारमा छौ
जति समय लगाउँछौ, शृङ्गार गर्न
त्यति समय नलगाउनु, प्यार गर्न ।
तिम्रो जिन्दगी तिम्रै कारण बर्बाद हुन्छ !
यदि बेलैमा सकेनौ भने, बिचार गर्न ।
लौरिलाई कहिलै पनि बिर्सन प्रयास नगर्नु !
त्यो फेरि पनि चहिन्छ खोला, पार गर्न ।
जब मान्छे आफ्नै नजरबाट गिर्छ नि!
कसैले सक्दैन उसको, उद्घार गर्न ।
तिमिलाई अनिशले प्रस्ताव गर्यो भने
अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन, स्वीकार गर्न ।।
अनिश न्यौपाने ” मनको आँखा ”
जनकपुर – हाल हेटौंडा
This entry was posted in गजल and tagged Aankha, Anish, Manko, Neupane, Pallawa, अनिश न्यौपाने "मनको आँखा", पल्लव. Bookmark the permalink.